12 FIKRADO AH SI AAD U DIYAARISID GEESKA JILICSAN EE GURIGAAGA - WARARKA
Maqnaanshahaagu ma yahay meel aad u raaxaysato si aad u nasato, ama aad go'aansatid inaad siisid goobta hore ee soo jiidashada cusub? Waxaanu kuugu soo bandhigaynaa si aad u barato fikrado xiiso leh, taas oo ay ugu dambeyntii qaadato ugu yaraan waqtiga, lacagta iyo dadaalka.
Natiijadu waxay noqon doontaa mid weyn - xitaa geeska ugu dheer, oo aanad tixgelin sida aag wax ku ool ah, wuxuu noqon karaa meel wanaagsan oo loogu talagalay wakhtiga firaaqada.
Faahfaahin yar ayaa ku filan booska si loo bedelo oo si buuxda loogu habeeyo inta kale ee qoyskaaga iyo asxaabtaada.
Aagga dib loo soo celiyay
Habkani wuxuu ku lug leeyahay meeleynta madadaalada ee ka hooseeya xuduudaha ku dhow.
Goobta xasiloonida, beerta waxaa lagu dhejiyaa derbi dhagxaan.
Meelaha dhagax saqafan waxay ku ururaan kuleyl, sidaas darteed, dhirta thermophilic, oo ay ku jiraan kuwa basbaaska leh iyo kuwa udgoon, ayaa si fiican u kori doona kursiga keydka.
Duufaantu waxay ka buuxsantaa karintooda, waxay ka dhigi doontaa mid xiiso badan. Si loo qariyo indhaha murtida, xoortay, xayndaab, shaashado ayaa loo isticmaalaa.
Raaxada ugu badan, oo aan lagu qasbin indho la yaab leh, hareeraha hareeraha ka dambeeya gumeysiga oo ku xiran dhirta fuulaya.
Sidaa daraadeed aad u fiican inaad dareentid nabadgelyo isku dhafka ah ee carafka dhirta aad jeceshahay. Next to ubaxa waa alaabta, for ubaxa laftiisa, waxaan ku talinaynaa isticmaalaya-aadanku, lavender, basasha madaxtooyada, sage.
Wixii qarsoodi ah, shaashad degdeg ah oo la sameeyay oo lagu ciyaaro noocyo kala duwan ayaa loo isticmaalaa. Waa hab wax ku ool ah oo looga hortago naftaada waqti ka waqti dunida oo dhan. Intaa waxaa dheer, waxaad dhisi kartaa derbiga "mobile", oo lagu xiro dhar dhejis ah oo ku xiran xarig dhexdhexaad ah oo u dhaxeysa geedaha kuugu dhow.
In hooska dhirta
Isticmaalida dhirta fuulidda, waxaad abuuri kartaa meesha ugu hooseysa. Pergola waxay noqon doontaa gariig cusub oo ah maalinta ugu kulul. Dareemka hydrantsa wuxuu siin doonaa hoos hoos iyo qabow qoto dheer, iyo inta lagu jiro ubax waxay buuxin doontaa hawada leh caraf macaan.
Maalinta xagaaga ku buuxi midabada ugu quruxda badan ee digirta cas ee nasturtium iyo dabeylaha casriga ah iyo dhirta kale ee fuulaya.
Wanaagsan abuuritaanka teendhada dabiiciga ah ee Ipomoea ama nasturtium.
Ka baxsan tartanka waa digir macaan oo leh caraf udgoon iyo quruxda dabiiciga ah.
Derbiyada xoogga leh ayaa kori doona inta u dhaxaysa taageerooyinka, qarinaya fududaynta qaabka ka dambeeya ubaxyo raaxo leh iyo caleemo.
Saldhigga, waxaad isticmaali kartaa inta kudhisan dhismeyaal aan habooneyn, oo ay ku jiraan khafiifiye.
Qolol "qol" oo ku yaala bartamaha beerta
Jahannamo, waxaad abuuri kartaa "qol" jilicsan oo la isticmaalayo hababka fudud ee fudud. Qurxinta quruxda badan ayaa la abuuri karaa iyada oo la adeegsanayo alaab sawir leh, tusaale ahaan, shumaca oo taagan miiska.
Ku dhaji caleemaha muusiga ah ee geedka, kaas oo buuxin doona beerta leh dhawaaq silvery ah marka dabayshu dhacdo. Qalabka wax lagu qoro iyo qalabka ay jecel yihiin guriga ayaa ka noqon doona wadnaha ugu quruxda badan iyo qurxinta asalka ah.
Biyaha - ilo nabadeed
Uma helin caawiye dheeraad ah oo ku habboon oo diyaarinaya meel aad u wanaagsan oo loogu talagalay wakhtiga firaaqada ah ee biyaha. Waxay keentaa isku-dhafka is-qabsiga ee is-qabsiga iyo nasashada.
Barkad dabiici ah ama dabiici ah waa meesha ugu fiican ee lagu nasan karo. Dhulkana ka samee alwaaxda agagaarka ah iyo cagahaaga marwalba way qalalan yihiin.
Biyaha caloolaha ah ee xeebta iyo guga busting ah ee xarunta ayaa bixiya waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Laga soo bilaabo mashiinada dusha biyaha waxaa aad u xiiso leh in la daawado jilbaha, kalluunka iyo dadka kale ee ku nool adduunkan biyaha yar.
Goob deg deg ah
Si aad u kala qaybiso booska, ma ahan mid lagama maarmaan u ah in la dhiso derbiyada caasimadda.
Beerta dhexdeeda, xaddidaadda calaamadda aagga waa mid aad ufiican, tusaale ahaan, hareeraha hareeraha dhagax ee dhagaxda dhexe ee cawska.
Kala soocida noocan oo kale ah waxay ku kacaysaa waqti iyo lacag aad u yar, saameyntana waa la ogaanayaa.
Dhigista wadada, waxaad u baahan tahay inaad si qotodheer u dhejisid, si khadka loo kala qeybiyo uusan fara galin inta lagu goynayo cawska.
Xitaa qaabka ugu fudud ee pergolas wuxuu abuuri doonaa qolka "qol" oo ku yaala geeska la ilaaliyo ee beerta. Ku qurxinta dhirta fuulista, waxaad ku siin doontaa qarsoodi iyo qarsoodi.
Iyo inaad siisid meel aad ku nasto xitaa kalsooni dheeraad ah, waxaad ku dhejin kartaa shaashadaha dhinaca iyo shiraacaha. Dharbaaxo leh qoryaha kor ku xusan waxay abuuri doontaa dareen ah raaxada guriga.
Haddii aad kursi aad u yar ku haysatid derbiyada iyo saqafka, waxaad heli doontaa niche raaxo ah oo aan ka gaabaneynin gawaarida marka laga reebo cabirka.
Hadday "guriga" sida "guriga" uu ku yaala hareeraha geedo waaweyn oo cufan leh, nasashadaadu cidna ma dareemi doonto. Dhinaca hore ee dhismaha waa in loo jeestay meel ugu quruxda badan beerta si ay indhaha u arkaan aragtida ugu fiican.
Qaabka asalka ah ee kala go 'beerta iyo qaabaynta geeska la ilaaliyo waa dhismaha derbiyada dhagax dhererkoodu yar yahay oo ku dayda burburinta qadiimiga ah.
Dhanka koonfur-galbeed, dhismahan wuxuu isku ururin doonaa kuleylka habeenkii iyo u bixiyaa fiidkii qaboobaha.
Qalab aad u fiican oo loogu talagalay qaab-dhismeedka noocan oo kale ah waxay noqon kartaa lebenkii hore ee qoryaha ama dhagax dabiici ah.
Biyaha cabbiray qiyaasta
Muhiim ma ahan inaad ku jirtid bangiga wabiga weyn si aad ugu raaxaysato dareemayaasha aan la sheegin ee lagu bixiyo biyaha kala-soocidda.
Meel yar oo ballaadhan ayaa bixin doona nasasho ku filan labada jirka iyo nafta.
Mararka qaar waa ku filan tahay in ilo yar yar ay ku istaagto qubeyska qashinka lagu qubeysto ama biyaha oo ku jira taangiyada birta ah.
Waxaa jira tiro aad u badan oo xulasho ah oo loogu talagalay abuurista mini-balli iyo alaab kale oo farshaxan ah beerta.
Si fudud oo dhaqso ah, si dhakhso ah oo aan lahayn kharashka dhaqaale, adoo adeegsanaya dadaal yar, adigoo hubinaya fikradaheena iyo fikradaheenaaga, waxaad abuuri kartaa meel fiican oo aad ku nasato goob kasta.